Anker PowerCore III Elite 25600 87W Portable Charger ~ ICT.com.mm
HomeAnker PowerCore III Elite 25600 87W Portable Charger
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ ၂၅၆၀၀ ပါဝါဘဏ် နှင့် ဖုန်းများကို တစ်ရက်ထဲတွင် အကြိမ်များစွာအားသွင်းနိုင်သည်။Iphone 11promax ကိုလေးကြိမ်၊Ipad mini5ကို သုံးကြိမ် နှင့် Macbook Air 2020 ကို တစ်ကြိမ်အားသွင်း နိုင်သည်။ USB C အားသွင်းပေါက်တစ်ပေါက်မှ ၈၇W အထိ အားသွင်းပေးနိုင်သည်။Macbook pro နှင့် Lenovo X... [Learn more]
Brand: AnkerSKU: N/ASee more: Anker, Mobile Accessories, Products, Recent Updates, ShopFilter by: Power Banks
၂၅၆၀၀ ပါဝါဘဏ် နှင့် ဖုန်းများကို တစ်ရက်ထဲတွင် အကြိမ်များစွာအားသွင်းနိုင်သည်။Iphone 11promax ကိုလေးကြိမ်၊Ipad mini5ကို သုံးကြိမ် နှင့် Macbook Air 2020 ကို တစ်ကြိမ်အားသွင်း နိုင်သည်။
USB C အားသွင်းပေါက်တစ်ပေါက်မှ ၈၇W အထိ အားသွင်းပေးနိုင်သည်။Macbook pro နှင့် Lenovo X တို့ကို အားအပြည့်သွင်းရန် နှစ်နာရီခန့်သာကြာနိုင်သည်။ USB C အားသွင်းပေါက် နှစ်ပေါက် မှတစ်ပြိုင်နက် အားသွင်း လျှင် မြန်နှုန်းမြင့် စနစ်ဖြင့် အားသွင်းပေး သည်။လေးပေါက်လုံးမှ တစ်ပြိုင်နက် အားသွင်းလျှင် ၇၈ W အထိ အားထုတ်ပေးနိုင်သည်။
၆၅ W အားသွင်းခေါင်းနှင့် အားပြန်သွင်းလျှင် နှစ်နာရီမျှသာ ကြာမည်ဖြစ်သည်။
Anker ၏ ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာဖြစ်သော Multiprotect နည်းပညာပါဝင်မှု ကြောင့် ဖုန်းများ လက်တော့ပ် များ အပူချိန် လွန်ကဲခြင်း၊ ဘက်ထရီ လွန်ကဲခြင်း များကိုထိန်းချုပ်ပေးသည်
ပါဝါ ခလုတ်အား နှစ်ကြိမ် နှိပ်ခြင်း သို့မဟုတ် နှစ်စက္ကန့်ကြာအောင် ဖိထားလျှင် LED မီးသည် အစိမ်းရောင်သို့ပြောင်းသွားပြီး နားကြပ်၊Bluetooth စပီကာ နှင့် အခြားဆက်စပ်သည့် ပစ္စည်းများကိုလဲအားသွင်းနိုင်သည့် စနစ်ပါဝင်သည်။
Keep your phone and tablet charged for days, or to give your USB-C laptopafull charge thanks to the 25,600mAh cell capacity.
Use the included 65W wall charger to give PowerCore’s internal batteryafull recharge in just over2hours.
Total price:K264,567 K240,741
This item: Anker PowerCore III Elite 25600 87W Portable Charger K205,000